Azonao atoro ahy ve ny fomba hiverenana rindran-damina nefa tsy mandratra ny laharako?
Alohan'ny hampisehoana anao ny fomba ahafahana miverin-dalana tsara kokoa ary tsy mahazo tombony lehibe ho anao ianao dia avelao hiditra lalindalina kokoa. Tsy ilaina ny milaza fa tokony hanorina rohy mahazatra ianao mba hampitombo ny fifamoivoizana fikarohana bebe kokoa ao amin'ny tranokalanao na ny blôginao. Ary misy angamba ny tetikasa tena mazàna nefa mbola betsaka sady be dia be ny "mahazo" an'ireo backlinks mendrika amin'ny votoatiny. Noho izany, tokony hamorona votoaty lehibe foana ny olona mba hisarihana ny rohy maromaro, i. f. , ny fomba azo antoka indrindra. Saingy mbola mitoetra ny fanontaniana - ahoana no ahafahana miverin-dalana miaraka amin'ireo asa soratra manintona tsara anao, raha te hahasarika mpihaino mahazatra ianao ary hampiarahina izany ao amin'ny tranokalanao na ny blôginao, dia mila mila manana rohy momba ny fifandraisana tsara ianao - raha te hahatsara kokoa ireo mpitsidika ary mamela azy ireo hifandray amin'izy ireo?
(dikantsoratra: xiao1) sinograma faha-733 ampiasaina indrindra ao anatin'ny teny sinoa. Tokony hofenoina https://mg.wiktionary.org/w/index.php?title= 0 & oldid =. Saingy tianao ny mahafantatra ny fomba ahafahana miverin-dalana miverimberina mba tsy ahiahy anao momba ireo fiantraikany mety manimba ny tranokalanao na ny bilaogy, sa tsy izany? Andeha hojerena izany - ny fisorohana ny sazy mifandraika amin'ny ezaka fampifandraisana ny rohy dia tsy momba ny vintanao - dia ny mahametimety ny karazana backlinks amin'ny fomba mahazatra sy ara-boajanahary ihany. Midika izany fa ny fametrahana lohamilina azo antoka voajanahary miaraka amin'ny lahatsoratra vita am-potokisana tsara napetraka tamina loharano azo itokisana sy mendri-pitokisana mifandraika amin'ny orinasa orinasa orinasa misy anao - dia tsy ho voasazy velively. Ary tsy azo lazaina mihitsy hoe tokony hialana ny tetibolam-bola rehetra, ny fifanakalozana na ny teti-pivoarana rehetra raha tsy te-hananganana sainam-borona amin'ny Google ianao ary hahazoanao ny sazy haingana sy matetika tsy mety.
Toy izao ny fomba ahafahana miverin-dahatsary amin'ny kalitao avo lenta ho an'ny fifamoivoizana an-dalamby avy hatrany - ny zava-dehibe dia tsy vitan'ny hoe mahatsiaro ho voaaro fotsiny fa hanosika tsara ny tetikasanao manontolo amin'ny tanjona manerantany amin'ny seho amin'ny seho. Noho izany, etsy ambany aho dia hametraka lisitra roa ho azonao hanampiana amin'ny fanokafana votoaty mazava - mazava ho azy, indrindra ho an'ny rohy fanorenana.
Manaova votoatin'ny pejy mifangaro tsara amin'ny vola
Mitandrema amin'ny asa ho an'ny mpikirakira traikefa - miezaha hahita ireo mpanoratra matihanina matihanina ao amin'ny niche jeneralanao. Tsy adin-tsaina - raha ny marina, ny mendrika ny handoavana ny zava-drehetra amin'ny toerana sy manokana mifanaraka amin'ny zavatra ilainao. Farafaharatsiny amin'ny voalohany, mandra-pahazoanao ny haavony ary ho afaka hikarakarana vongan-dahatsoratra vitsivitsy tsy misy fanampiana avy amin'ny antoko fahatelo. Soso-kevitra: aza miady saina loatra amin'ny fanenjehana loatra, dia aleo manitsy maotina ary manomboka fifanakalozan-dresaka matotra, fampahafantarana ny tenanao, ny tetikasanao an-tserasera, ary mazava ho azy fa mandany fotoana ampy hanombanana ny mpandika teny manan-talenta rehetra alohan'ny fanambadiana.
Lozam-pifamoivoizana - Ampio ny fahalalanao tsara indrindra Rehefa mandany fotoana
Raha ny mahazatra indrindra, Mino fatratra fa ny mpamaham-bolongana no mety hany vahaolana azo atao. Saingy tsy ny tantara manontolo no azoko antoka. Ireto misy lisitra fohy momba ny teboka navoakanao amin'ny ho avy:
Manandrama manoratra lahatsoratra an-tariby manan-danja mba hahazoana an'io bakoka mendrika io avy amin'ny fizarana bio. Tsara ho an'ny kick kick start, saingy ity lalana ity dia tsy mahomby amin'ny fametrahana fifandraisana mahery vaika.
Diniho ny fampiasanao ny fotoanao sy ny ezaka amin'ny famoronana ireto karazana votoana manaraka ireto, izay nasongadina indrindra ho an'ny fizarana sy ny fifandraisana amin'ny, toy ny torolàlana azo ampiharina, ny fandalinanao manokana, ny filazalazana manintona, ny takelaka ilaina, sns.Fanamarihana: andramo ny fanavaozana ampahany amin'ny votoatinao misy anao - tsy mila manamboatra ny kodiarana ianao, sa tsy izany?
Miaraha miasa hatrany amin'ny fananganana fanatanjahana an-tserasera amin'ny media sosialy, tsy vitan'ny mampiroborobo ny votoatiny azo ampiasaina sy azo zaraina afa-tsy amin'ny fanatsarana ny anaranao na ny orinasa orinasa amin'ny fotoana iray ihany.
Ho an'ireo rindran-kira tena sarobidy nefa tsy azo antoka loatra avy amin'ny tranokala fanabeazana na governemanta miaraka amin'ny PageRank farany ambony sy ny lanjany mifampitohy, mihevitra ny fametrahana vatsim-pianarana, mitantana fifaninanana, na siramamy saro-bahana - manome azy ireo lahatsoratra manokana Izay tiany ho ren'izy ireo. Tadidio fa ny vola madinika indrindra sy ny safidy backlinks dia tsy vola fotsiny ihany Source .